NFC ဆိုတာဘာလဲ?? ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ?? – DigitalTimes
အရင်တလောကပဲ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ်ပါရမယ့်အရာတွေနဲ့ ပါသင့်တဲ့အရာတွေအကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာ NFC ဆိုတာလေးပါပါတယ်။ ဒီတော့ NFC ဆိုတာဘာလဲ ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
NFC ကတော့ Near Field Communication ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး device ၂လုံးကြား ၄စင်တီမီတာအကွာအဝေးအတွင်းမှာ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ ဒေတာတွေကို ပေးပို့လက်ခံနိုင်တဲ့ နည်းပညာပါ။ ဒီ NFC connection ကတော့ Wi-Fi တွေ LTE တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဘာမှလည်း ထပ်သုံးစရာမလိုပါဘူး။
ဖုန်းမှာ NFC ပါမပါ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ??
NFC ပါမပါသိဖို့ Setting> More ဒါမှမဟုတ် Setting> Wireless & Network ထဲကနေ NFC ဆိုတဲ့ option ပါမပါကြည့်ရုံပါပဲ။ NFC ပါတဲ့စမတ်ဖုန်းအများစုကတော့ ကျောဘက်ကိုယ်ထည်မှာ NFC logo သေးသေးလေးထည့်ထားတတ်ပါတယ်။
Android မှာ NFC ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ??
NFC ကတော့ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ ဒေတာတွေကိုပေးပို့လက်ခံတာပါ။ Bluetooth နဲ့မတူတာက သူက လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာပါ။ ပိုစတာ စတစ်ကာစတဲ့ စွမ်းအင်မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေက စမတ်ဖုန်းလိုမျိုး စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့လိုက်ရုံနဲ့ဒေတာတွေပေးပို့လို့ရနိုင်တာ အားသာချက်ပါ။
NFC mode ၃မျိုးကတော့
– Reader/ Writer ( NFC poster တွေက tag တွေဖတ်နိုင်ဖို့)
– Card Emulation (ငွေပေးချေနိုင်ဖို့)နဲ့
– Peer-to-Peer (ဖိုင်တွေပေးပို့နိုင်ဖို့)ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
Android တွေမှာ NFC ရဲ့ပြဿနာ
– ဖုန်းတိုင်းမှာတော့ NFC chip မပါဝင်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းတော့ တော်တော်များများသုံးလာကြပါပြီ။
– ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတာကြောင့် NFC chip ထားသိုတဲ့နေရာလည်း မတူတော့ ရှာရတာမလွယ်ပါဘူး။
– ဖိုင်အမျိုးအစားတွေမတူကြတဲ့အခါ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမကိုက်ညီတော့ပါဘူး။
Android မှာ NFC စသုံးမယ်ဆိုရင်??
ပထမဆုံး NFC ရော Android Beam ကိုရော “enable” လုပ်ထားရပါမယ်။ လုပ်စရာလိုတာလေးတစ်ခုကတော့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကိုရွေး (ဥပမာ-ဓာတ်ပုံ) ပြီးရင် ဖုန်း၂လုံးထိလိုက်ရုံနဲ့ရောက်သွားပါပြီ။ ဘာ “send via” option ကိုမှ ရွေးစရာမလိုပါဘူး။ ဖုန်း၂လုံးကို ကျောချင်းကပ်ပြီး ပေးပို့မှုကိုအတည်ပြုဖို့ “touch to beam” လေးကို အတည်ပြုပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါကို “File Beam” လိုမျိုး app တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ပိုပြီးလွယ်လွယ်မြန်မြန်ပေးပို့လို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
နောက်ရက်ကျရင်တော့ NFC ကို ဘာအတွက်သုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကို ဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်။ သူ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေက တော်တော်လေးမိုက်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦး….
Nokia6(2018) ရဲ့ spec များထွက်ရှိလာ
CES 2018 မှာ မိတ်ဆက်နိုင်မယ့် နည်းပညာထုတ်ကုန်များ